Ho an'ny zanakao lahy - Bezzia | Bezzia
Ho an'ny zanakao lahy
Ao amin'ny fizarana 'Ho an'ny zanakao lahy'Hiresaka momba ireo vokatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny fianakaviana kely indrindra ireo izahay. Noho izany, ho hitantsika ny fironana farany amin'ity sehatr'asa ity ary hanome anao antsipiriany momba ny entana tsirairay izahay, hahafahana manombana raha mividy azy.
Eto amin'ity zoro ity, noho izany, dia hisy toerana ho an'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny fitafian'ny ankizy, hatramin'ny kilalao na tavoahangy, fa miaraka amin'ny zavatra hafa tsy mitovy amin'ny ambin'ireo zavatra hita mahazatra.
Araka izany, amin'ity fizarana ity dia afaka mahita hevitra momba fanomezana na zavatra mividy miavaka ho an'ny zanakao koa ianao.
ny Maria Jose Roldan hace 2 volana .
Ny zavatra ratsy indrindra azon'ny ray aman-dreny atao dia ny mampitaha ny zanany amin'ny hafa. Ny lohahevitry ny kabary dia iray ...
Torohevitra efatra momba ny fitsaboana ny fitohanana eo amin'ny zaza
ny Maria Jose Roldan hace 4 volana .
Ny fitohanana dia olana ara-pandevonan-kanina mahazatra eo amin'ny zaza. Aza adino fa ny tsinainao mbola ...
Inona no hatao raha manaikitra ny hohony ny zanakao
ny Maria Jose Roldan hace 6 volana .
Ankizy maro no manana fahazaran-dratsy ratsy manaikitra ny hoho. Momba ny…
Inona no hatao raha manana faribolana mainty ny zanakao
ny Maria Jose Roldan hace 8 volana .
Matahotra ny ray aman-dreny maro rehefa mahita fa manana faribolana mainty ny zanany nefa tsy misy antony mazava. Ny…
Ny fampiasana amoxicillin amin'ny ankizy
Amoxicillin no antibiotika be mpampiasa indrindra rehefa mitsabo aretin-bakteria ho an'ny olon-dehibe ...
Fitsaboana voajanahary hitsaboana ny fitohizan'ny zanakao
ny Maria Jose Roldan hace 9 volana .
Ny fitohanana dia mahazatra eo amin'ny zazakely sy ny zaza. Raha ny zazakely, hoy ...
Mianatra amin'ny fisaraham-panambadiana momba ny fitaizan-janaka
ny Maria Jose Roldan hace 2 taona .
Ny mandalo fisaraham-panambadiana dia mety ho iray amin'ireo traikefa mampivadi-po indrindra mahazo ny olona rehetra. Ho an'ny lehilahy ao ...
Hetsika an-kalamanjana ho an'ny ankizy amin'ny alina
ny Marta Crespo hace 3 taona .
Salama zazavavy! Ahoana no fandraisanao ny fidirana amin'ny fararano? Mazava ho azy fa mikaroka hetsika miaraka amin'ireo zanakao amin'ny fotoana malalaka ……
Fomba fanamboarana lokomena
Salama zazavavy! Hainareo rehetra io hatsaran-tarehy io ary azo antoka fa efa niaina ny te hahafanta-javatra mihoatra ny indray mandeha ianao ...
Tombontsoa azo avy amin'ny filomanosana aloha amin'ny ankizy
ny Maria Jose Roldan hace 3 taona .
Ny zaza mianatra milomano amin'ny faha-5 taonany dia hanana tombony lehibe eo amin'ny fampandrosoana raha oharina amin'ny ...
Mihaona amin'Andriamatoa Ovy mampihomehy ao Juguetitos izahay
Salama zazavavy! Niverina tany amin'ny kilalao kely Andriamatoa Ovy. Amin'ity indray mitoraka ity dia mahita ovy maniry fety sy ...